FIFA oo inka badan 400 ciyaaryahan ka heshay cabasho dhaqaale… (Sidee ayay u maareyn doonaan?) – Gool FM
Horudhac: Chelsea vs Manchester City… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee afar dhammaadka FA Cup-ka)
FIFA oo inka badan 400 ciyaaryahan ka heshay cabasho dhaqaale… (Sidee ayay u maareyn doonaan?)
(Zurich) 14 Juun 2020. Tiro kor u dhaafeysa illaa iyo 400 oo cabasho dhaqaale ah ayaa soo gaaray hay’adda ugu sarreysa kubadda cagta ee FIFA, waxaana lagu soo warramayaa inay badankood ka socdaan qaaradda Yurub.
Kiisaska dacwooyinka ka yimid ciyaartoyda ee gaaray qaybta FIFA u qaabilsan maal galinta ciyaartoyda oo loo yaqaano FIFA Fund for Football Players (FFP) ayaa tiradooda waxay tahay 441, waxaana dhammaantood ay ku andacoonayaan inaysan heysan xuquuqda mushaharaadkii ay ku lahaayeen kooxahooda.
Boqolkiiba 89 dacwooyinkan ayaa ka yimid kooxaha qaaradda Yurub, halka 11 boqolkiiba ay ka kala socdaan daafaha dunida.
Ciyaartoyda kale ee harsan kuwaasoo iyaguna diyaarinaya dacwadaha ka dhanka ah kooxahooda ayaa loo qabtay illaa dhammaadka bishan Juun, iyagoo cabashadooda soo marin doona ururka ay ku mideysan yihiin ciyaartoyda dunida ee FIFPRO.
Madaxweynaha FIFA ee Gianni Infantino ayaa 12.3 Milyan oo Gini u diyaariyay xiddigaha ay ka maqan yihiin mushaharaadkooda 2020 illaam 2022, halka uu 3.8 Milyan oo Gini ugu talo galay xiddigaha ay ka maqan yihiin mushaharaadka 2015 illaa 2020.
Lacagaha ay FFP ugu talo gashay xiddigaha mushahar la’aanta ah ayaanan si buuxda u dabooli doonin dhammaan xuquuqda mushahar ee ka maqan xiddigaha ay kooxahooda awoodi waayeen bixinta lacagahaas.
Quique Setién oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Barcelona ee ka qeyb galaya kulanka Leganes